Sambula izinkolelo zekhondomu!
Kungenzeka ukuthi usuke wezwa kuthiwa "awukwazi ukudla uswidi ungaphakathi kwe-wrapper". Yebo, kuyiqiniso kodwa ukuya ocansini kuyindaba ebalulekile. Kunezifo ezithathelwana ngocansi (STIs) ezingadluliselwa kusuka kumuntu oyedwa kuya komunye kukhona nokukhulelwa okungahleliwe. Kodwa amakhondomu ahlinzekela ukukuvikela ezifweni ezithelelwana ngocansi (STIs) nokukhulelwa. Nazi izinkolelo ezivamile ezingelona iqiniso:
• Inkolelo yokuqala: Amakhondomu anciphisa injabulo yakho yocansi
Ukusebenzisa ikhondomu kunganciphisa ukuzwa kahle kodwa kunezinhlobo zosize ezahlukene, ukubukeka okuhlukene, imibala ehlukne, kanye nama-flavour amakhondomu ahlukene; kudingeka uthole leyo evumelana nanikahle.
• Inganekwane yesibili: Kuphephile ukusebenzisa amakhondomu amabili
Ukusebenzisa amakhondomu amabili akulungile njengoba kungenzeka ukuthi adabuke. Sebenzisa eyodwa kuphela ngesikhathi esisodwa.
• Inkolelo yesithathu: Amakhondomu aphuka kalula
Amakhondomu awaphuki kalula uma uwafaka kahle. Vula ngokucophelela, ubambe isicu bese uyifaka phansi. Qaphela amazipho, ubucwebe noma amazinyo. Uma ikhondomu ingeke ingafuni ukuya phansi, kungenzeka awuyofakanga ngendlela engafanele.
• Inganekwane yesine: Awukwazi ukukhulelwa noma ukuthola izifo ezithelelwana ngoansi (STIs) uma usebenzisa ikhondomu
Uma usebenzisa ikhondomu ngendlela efanele, awukwazi ukuthola izifo ezithelelwana ngocansi (STIs). Ngakho qaphela uqetshezi lwekhondomu noma ukuvuleka kanye nezinsuku zokuphelelwa yisikhathi.
• Inganekwane yesihlanu: Uma ngicela engithandana naye ukuba sisebenzise ikhondomu, bazocabanga ukuthi angibathembi
Ukusebenzisa ikhondomu akuhlangene nokuthembana. Kusho ukuthi uyakwazi ukuzinakekela kanye nothandana.
• Inganekwane yesithupha: Amakhondomu asetshenziswa uma uzofaka ipipi kusitho sangasese sowesifazane
Amakhondomu asetshenziselwa zonke izinhlobo zoansi, ukufaka phakathi uansi lomlomo kanye nolwasezinqeni. Khumbula ukuthi ungathola isifo esithelewana ngocansi (STI) nakucansi lasemlonyeni.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwekhondomu noma ukuthi ungayithola kanjani ikhondomu yabesilisa nabesifazane, vakashela emtholampilo oseduzane noma isikhungo sezempilo.